TETIKASA “TOSIK’ART” : Efa miatrika fiofanana ireo 27 mianadahy tafiakatra
Efa nanomboka omaly 2 oktobra 2019 ny fiofanana ho an’ny tanora miisa 27 mianadahy tafakatra amin’ny dingana manaraka tamin’ilay fifaninanana Tosik’art. 4 octobre 2019
Tetikasa novolavolain’ny Minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina hampirisihana ireo mpandraharaha hampiasa ny volany eo amin’ny tontolon’ny kolontsaina. Eny amin’ny CEFOM (Centre d’Etudes et de Formation Multimédias) Maibahoaka Ivato izy ireo no miatrika ity fiofanana ity. Rantsa-mangaikan’ny minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ihany ny Cefom ary azo andraisana mpiofana maro be.
Tsiahivina moa fa ity tetikasa ity dia karakarain’ny minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina miaraka amin’ny banky Boa Madagasikara. Andiany voalohany izy ity ary hampahafantarina tsy ho ela indray ny andiany manaraka. Natao miendrika fifaninanana ny tetikasa mba hahafahan’ny mpisehatra rehetra mandray anjara sy mampivelatra ny fahalalany eo amin’ny tontolon’ny kolontsaina.
“Manandratra ny firenana ny kolontsaina, manome asa, mamelona olona sy fianakaviana maro no sady mampiseho ny maha izy azy antsika malagasy ka tsara raha ampivoarina sy hanaovana fifaninanana tahaka izao hampiroboroboana azy”, hoy ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina. Efa tamin’ny 05 aogositra lasa teo moa ity fifaninanana tosik’art ity no nisokatra ary tamin’ny 23 septambra 2019 lasa teo no nifarana. Lelavola 20 tapitrisa ariary no ho azon’izay mahazo ny laharana voalohany, 15 tapitrisa ho an’ny faharoa, 10 tapitrisa ho an’ny fahatelo, 5 tapitrisa ho an’ny fahefatra ary 2 500 000 ho an’ny laharana fahadimy.